हिटलरका यौन र जिबन सम्बन्धी रहस्यमय गोप्य कुरा ! हेर्नुहोस «
हिटलरका यौन र जिबन सम्बन्धी रहस्यमय गोप्य कुरा ! हेर्नुहोस
प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १०:४७
अडोल्फ हिटलरको यौन जिबन ?
विश्वकै सबै भन्दा ठूला तानाशाही मानिने हिटलरको हिजो अर्थात अप्रिल २० मा जन्मदिन परेको थियो। उनको जन्म १८८९ अप्रिल २० अर्थात हिजोकै दिन भएको थियो। बाहिरी दुनियाका लागि हिटलर जति क्रुर थिए।
भित्री दुनियामा पनि उत्तिकै क्रुर रहेको बताइन्छ। अमेरिकी एक संस्थाको एक रिर्पोट अनुसार यौन सम्बन्धको मालिनामा उनी निकै भिलेन भन्दा कम थिएनन्। हिटलरका बारेमा केही यस्ता कुरा छन् जो तपाइलाई विश्वास नै नलाग्न सक्छ।
एक इतिहासकारले उनको बारेमा लेखेको जीवनीमा हिटलरले वेश्यावृद्धीमा लागेका व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध बनाउने गरेको उल्लेख छ। कम उमेर र किशोरीसँग यौन सम्बन्ध राख्न उनी उत्साहित हुने गरेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
उनले आफ्नो यौन इच्छा पुरा गर्नका लागि विभिन्न अभिनेत्रीलाई आफूसँग बोलाउथे । केही पत्रपत्रिका र वेबसाइटमा प्रकाशित समाचारका अनुसार हिटलरले सेक्सका लागि अनौँठा अनौँठा हर्कत गर्ने गरेको जर्मनकी एक अभिनेत्रीले खुलासा गरेकी थिइन्। तर उनको १९३७ मा भर्याङबाट लडेर मृत्यु भएको थियो।
हिटलरका बारेमा यस्ता समाचार पनि प्रकाशित भएका थिए की उनले पुरुषसँग पनि यौन सम्बन्ध बनाउने गरेका थिए। उनी समलिंगी भएको बताइन्छ। एक मिडिया रिर्पोटका अनुसार हिटलर र उनका पुरै सेना समलिंगी भएको मान्न सकिन्छ। उनका जीवनीमा आधारिक केही पुस्तकमा पनि उनी समलिंगी भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै अर्को रहस्य के थियो भने हिटलरले बच्चाहरुसँग पनि यौन सम्बन्ध राख्ने गर्थे । यहाँ सम्मकी उनले आफ्नै भतिजीसँग पनि यौन सम्बन्ध राखेका थिए। पछि यो रहस्य बाहिर आउने खतरा भएपछि उनले आफ्नौ भतिजीको पनि हत्या गरेका थिए।
अडोल्फ हिटलरको थियो ?
अडोल्फ हिटलर (जर्मन: २० अप्रिल १८८९ – ३० अप्रिल १९४५) अष्ट्रियामा जन्मिएका जर्मन राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी (नाजी) का नेता थिए । विश्वका क्रूर शासकहरूमा गनिन्छन्। उनी सन् १९३३ देखि सन् १९४५ सम्म जर्मनीका चान्स्लर तथा १९३४ देखि १९४५ सम्म नाजी जर्मनीका शासक थिए । उनी नाजीबाद तथा दोश्रो विश्वयुद्ध शुरू हुनुका केन्द्रीय पात्र थिए ।
उनी पहिलो विश्वयुद्धका अनुभवी थिए । उनले सन् १९१९मा राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी (नाजी पार्टी)को सदस्यता लिए तथा सन् १९२१ मा सोही पार्टीको नेता बने । सन् १९२३ मा उनले एक “कु” को असफल प्रयास समेत गरेका थिए ।
सोहि असफल “कु” को कारणले उनी जेलमा परे जहाँ उनले आफ्नो संस्मरण मेरो संघर्ष लेखे । सन् १९२४ मा जेलमुक्त भएपछि उनी भर्साइल्सको सन्धिको कडा आलोचना गरी तथा बृहत जर्मन (विशेष गरी भाषिक कारणले), यहूदी बिरोधी र कम्युनिष्ठ बिरोधी गतिविधिलाई आफ्नो विशिष्ट व्यक्तिक्त्व कलाद्वारा समर्थन गरी लोकप्रियता हासिल गरे ।
हिटलरलाई चकलेट अत्यन्तै मन पर्थ्यो । चक्लेट खाइरहने उनको बानी थियो । हिटलरले इङ्ल्यान्डका राष्ट्रपतिलाई विस्फोटक चकलेटद्वारा मार्ने योजनासमेत बनाएका थिए । तर, त्यो सम्भव भएन । हिटलरलाई बिरालोसँग भने निकै डर लाग्थ्यो । आधुनिक विश्वमा हिटलर नै यस्ता पहिला व्यक्ति थिए, जसले धुम्रपानविरोधी अभियान सुरु गरे । अर्को कुरा, मारकाटको राजनीति गरेका हिटलर मांसाहारी थिए होलान् भन्ने धेरैको अनुमान हुन सक्छ ।
तर, उनी शाकाहारी थिए । उनले पशु क्रूरताविरुद्ध कानून पनि बनाएका थिए । हिटलरलाई ड्रग्सको लत बसेको थियो । उनी प्रत्येक दिन ८० प्रकारका ड्रग्स सेवन गर्थे । उनको स्वास्थ्य धेरै बिग्रेको थियो । हर समय शरीर काँप्ने गर्थ्यो । उनी आइड्रपमा पनि १० प्रतिशत कोकिन मिसाउँथे ।
उनी पेट फुल्ने समस्याबाट ग्रस्त थिए । यसबाट छुटकाराका लागि उनी २८ प्रकारका औषधि सेवन गर्थे । कलाकार चार्ली चाप्लिनका निकै ठूलो प्रशंसक थिए, हिटलर । चार्लीको जुँगा उनलाई खुब मन पथ्र्यो । त्यसैले त उनी चार्लीकै जस्तो जुँगा राख्थे । हिटलरका जुँगालाई ‘टुथब्रस जुँगा’ भनिन्थ्यो । हिटलर चार्लीभन्दा केवल चार दिन मात्रै कान्छा थिए ।
हिटलरका लागि त्यो सबैभन्दा खुसीको दिन थियो, जुन दिन ‘टाइम्स म्यागजिन’ले हिटलरलाई ‘म्यान अफ द इअर’को टाइटल दिएको थियो । यो सन् १९३८ को घटना हो । सन् १९३९ मा उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि नामांकित गरिएको थियो । सन् १९३३ मा हिटलरले जर्मनीको सत्तामाथि कब्जा जमाए ।
त्यसपछि उनको राज्य बिस्तारको अभियान सुरु भयो । उनले आफ्नो विरोधीहरूमाथि अत्यन्तै क्रुर व्यवहार गरे । राज्य बिस्तारका क्रममा उनको सेना बर्लिनको पर्खासम्म पुग्यो, जहाँ स्टालिनको रुसी सेना थियो । उनको राज्य बिस्तार अभियान जर्मन अन्धराष्ट्रवादको द्योतक थियो । उनकै कारण सन् १९३९–१९४५ को दोस्रो विश्वयुद्ध चल्यो । विश्वविख्यात तानाशाह हिटलरको मृत्यु सन् १९४५ अप्रील ३० का दिन भयो ।
ब्याङ्किङ प्रणालिमा ह्याक गर्ने धम्कि पछि ब्याङ्किङ प्रणालीमा ‘उच्च सुरक्षा सतर्कता’
मुन्धुमस्टार डटकम​- नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कसहित विभिन्न ब्याङ्किङ प्रणाली ह्याक गरेर ठूलो हानि पुर्‍याउने बेहोराको एउटा